NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance 4.22.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.22.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance
NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
We always have your security in mind. Rest easy knowing your personal finance data is protected by 128-bit encryption, and your credit score data is protected by our trusted partner, TransUnion®.
သငျသညျ, ခရက်ဒစ်ကဒ်ဆုလာဘ်တိုးမြှင့်နောက်ကျောအပိုငွေဝင်ငွေ, သင့်အကြွေးဝယ်ရမှတ်ကိုခြေရာခံသို့မဟုတ်ပိုမိုလွယ်ကူကိုဘတ်ဂျက်ဖြစ်စေလိုခြင်းရှိမရှိ, ကအားလုံးကိုဒီနေရာမှာပါပဲ။
ယနေ့ app ကို Download လုပ်ပါနှင့်ပြီးသားမတ်ပိုက်ဆံရွေ့လျားစေရန် NerdWallet သုံးပြီးနေသောလူများ၏သန်းပေါင်းများစွာ join ။
လူအ NERDWALLET APP ကို ​​ LOVE ဘာကြောင့်လဲ
apps တွေရဲ့တစ်ဦးကအများကြီးတစ်နေရာတည်း၌သင်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးခြုံငုံသုံးသပ်ပြပါ။ ကြှနျုပျတို့လညျးအပေါင်းငါတို့သည်သင့်ရဲ့အကြွေးရမှတ်ကိုခြေရာခံဘတ်ဂျက်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုချွေတာနိုင်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ကလွယ်ကူစေလုပ်ပါ။
save (နှင့်ဝင်ငွေ) ကိုစမတ်နည်းလမ်းများဖှငျ့
, သင့်ကိုနောက်ထွက်ပြေးဖို့အဘို့အခရက်ဒစ်ကဒ်ဆုလာဘ်အမြင့်ဆုံးသင့်ရဲ့ပေါင်နှံငွေပေးချေမှုကိုလျှော့ချနှင့်သင်ပြီးသားသယ်ဆောင်ကဒ်နှင့်အတူပြန် 2-10% ငွေသားဝင်ငွေ - ငါတို့သည်သင်တို့မိုးရရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲစိတ်ထဲ၌သင်တို့၏လုံခြုံရေးရှိသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးဒေတာ 128-bit နဲ့စာဝှက်စနစ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်နှင့်သင့်အကြွေးဝယ်ရမှတ် data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရလက်တွဲဖော်, TransUnion®အားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်ကို သိ. လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
app ကို Download လုပ်ပါ, သင့်အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်များကိုင်တွယ်။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့င့်ကိုမိနစ်ကြာပါတယ်။
NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance အား အခ်က္ျပပါ
blacknwhitekid စတိုး 3.51k 1.03M
NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.22.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.nerdwallet.com/page/privacy
App Name: NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance
Release date: 2019-09-10 05:06:39
လက်မှတ် SHA1: 25:EC:70:57:DE:AF:5C:64:71:E4:96:5F:86:1E:01:D9:81:0B:F7:9C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Chase Seibert
အဖွဲ့အစည်း (O): NerdWallet
NerdWallet: Credit Score, Budgeting & Finance APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ